Dood Wadaag: Suufi iyo Salafi
W/Q: Liibaan Cumar, February 17, 2009
Suufi: Asalaamu Caleeykum, Sheekh Abu-Suleeymaan.
Salafi: Wacaleeykumu Salaam Waraxamatulaahi Wabarakaatuhu.
Suufi: Haye, xaal waa side? Soddomeeyo sanno oo feker mayal adeyg iyo seef-la-boodnimo ah, maxeey natiijadiinii ku danbeeysay, yaa Abu-Suleymaan?
Salafi: Bismillaah, Al-xamdulilaahi Wakafaa! Ma fahmi karo waxaa aad ka warameeyso. Haddii aadan is indho tireeynin waad ogtahay waxqabadki tayaarka Salafiga ah uu ka geeystay horumarinta, iyo kobcinta fahamka Islaamka iyo weliba fidinta Dacwada. Falilaahi Al-Xamdu aqal majiro ilaa waxaa ka shidan nuurka Islaamka. Goor wanaagsan ayeey aheeyd markii ay culimo muwaxidiin ah, oo mukhlisiin ah ummadda ka qabteen qolooyinkiinii shirkiga iyo khuraafaadka ku adeeganayay. Kuwii masaajiddada ka fogaaday ee mawlacyada ka hirraagay, waad arkeeysaa qaatimadoodii.
Suufi: Duulaankii ay Salafiyada soo qaadday muddo hadda 30 sanno laga joogo natiijadiisii maanta cidna kama qarsoona. Wahaabiyadu waxaa ay u timid Shacab Soomaaliyeed oo Muslim ah oo is ogol, oo garanaya taariikhda ay leeyihiin iyo kifaaxii aay u soo galeen jiritaankooda, markaa bey mar uun ku soo habsatay. Maal gelin aanan xisaabsaneeyn oo ka soo afuufmeysa hey’adihii u xilsaarnaa dhoofinta Salafiyada (Wahaabiyada) ayaa lagu burburiyay qaabdhismeedkii bulsho ee ummadan. Ummadan Soomaaliyeed waxaa ay laheeyd nidaam baahsan oo culuumta diinta lagu barto, xalaqaad cilmi oo heerkasta leh, laguna daraaseeyo fanni kasta oo diinta ah ayaa ka baxayay masaajidada dalka oo idil. Mujtamacu waxaa uu lahaa xiriiro bulsho oo isku tiirsan iyaguna ay kuwada xiriiraan. Waxaa jiray dulqaad iyo tasaamux dhanka aragtiyada kala duwan ee nolosha ah. Hal marbaa Wahaabiyadiinii oo aan dhego laga qabta laheeyn oo ku hubeeysan Fatxul-Majiid iyo Usuulu-Thalaatha ay ka dagaal galeen aag kasta oo bulshadu leedahay. Nidaamkii soo jireenka ahaa ee xifdiga qur’aanka waa la baabi’iyay. Barashadii fiqhiga iyo axkaamta, culuumtii qawaacidda carabiga, adabkii iyo suugaanta waxaasoo idil waxaa baabi’iyay wiilal yaryar oo tafaha soo xeytay oo ummaddii oo idil qaanado u sameeystay: Waa Maaddi, Waa Mushrik, Waa Cilmaani, Waa Khuraafi, Waa Mutasaahil, Waa Mubtadic, Waa Caariyah, Waa Faasiq iwm. Waxaa intaa ka sii daran magaranayaan micnaha erayadan ay ku hadaaqayaan.
Salafi: Wax kastood tiraahdo, Waxaa Illaaheey mahaddii ah in maanta xaqqii la bayaaniyay. Oo aanan la ogolaanin in qof danbe lagu siro hawlo baadhil ah: siyaarooyin shirkiga lagu faafiyo, Mawliid, Kur, Abaay-abaay, Bil-Labo, Xus iyo Waliimo, Masaafo, Dikri iyo Xadro, Maanyo Gal, Shaafiin, Kitaab-Gaablow, Taqliin, Fiddow iyo khuraafaad kale oo aad ummaddan ku lugooyseenba. Qolooyinkiinii dariiqada Sufuuyida waad ogtihiin sidaad mujtamacan ula harteen oo aad u habsaamiseen. Waxaad aqbasheed Faslu-Diin-Cani-Dawlah, oo hogaankii ummadda waxaad uga raali noqoteen calmaaniyiin gaalo raac ah. Waxaad noqoteen aalad lagu xalaaleysto xukunkii mujrimka ahaa oo aan dankale laga laheeyn. Idinkana hawshiinii waxaa ay noqotay in haweenkii iyo odayaashii aad kun balaayo iyo masiibo u sheegtaan oo xoolihii ka gurataan. Al-Xamdulilaah dadaal iyo juhdi dacwo oo lagu dhisayo caqiidada, laguna abuurayo ummad muwaxidiin ah ka dib, maanta khuraafaadkiinii ma shaqeeynayo, Maashaa Allaah.
Suufi: Aryaa tanoo kale arkay?! Waxaa la yaab leh inaadan garaneeynin taariikhda aad leedihiin iyo waxa aad fasheen. Waad ogtahay xilligaad soo if baxdeen in idinkoo budhadh la haliilaya aad masaajiddo badan dhiig ku daadiseen; Rixle, Saalimoow iyo Kurbin badanna kadabkoodu galay. Kitaabo badan oo ay ka mid yihiin Safiinatul-salaat, Qaasimi, Minhaaj ayaa meelkastaa lagu kitfay; tusbax isaga warkiisa dhaaf. Fiqhigii Shaaficaga ayaa lala dagaalay oo booskiisii Fiqhigii Xanbaliga la keenay ileeyn lacag waalan ayaa shaqeeyneyso eh. Taariikhdii ummaddan Soomaaliyeed ayaa la duugay, oo leyska indho tiray noloshan casriga ah ee dunidan iyo taxadiyaadka ka jiray mandhiqada iyo guud ahaan nidaamka caalamiga ah. Waxyaabo yaryar ayaa diintii lagu soo koobay. Jaamacadihii Muqdisho ayaa mar uun lagu dhex arkay iyadii oo fasaladii dhalinyaradii salafiyadu aay ku dhex cadayanayaan oo ay leeyihiin waa ixyaa’ul Sunnah, waxaan nooleeyneynaa sunnada Rasuulka (SCW). Mashaqaa dhacday, foolxumo, xadgudub iyo wajigabax faro badan ayaad laheeydeen Li’ajli Laahi baan u sameeyneynaa. Muxaadaraad xambaarsan dhambaalo iyo farriimo mas’uuliyad darro ayaa meelkastaa ka bilaabatay. Fahamkan Salafiga ahi waxaa uu qafilay oo uu awday garashadii iyo halabuurkii dhalinyaradii Soomaaliyeed. Waxaa lala diriray fankii iyo suugaantii oo idil, iyo weliba culuumtii bulshada iyo bani’aadamka. Cilmul-Kalaam iyo Falsafad waxaa lala meel dhigay diin ka bax. Waxaa la fogeeyay culimadii waaweyneeyd ee maqaamka ku laheeyd taariikhda Islaamka sida Ibnu-Rushdi, Abii Xaamid Al-Ghazaali, Inbu Carabi, Abu Xasan Al-Ashcari, Abii Xaniifa iyo qaar badan oo aanan halkaan lagu soo koobi karin. Waxaad abuurteen aduunyo uu qofku Muslimka ahi ay had iyo goor tiiraanyo, murug iyo hoog u taal, ka dib markaad la dirirteen waxkasta oo uu mujtamacan ku cabirayay farxadooda, iyo maalmahooda maamuuska leh. Siyaarooyinka iyo billabada aad ka warantay waxaa ay ku fadhiyeen ahmiyad weyn oo bulsho. Waa xiriir dhaqan bulsho oo isku hayay unugyada hoose shacabka. Waa isku immad iyo mawsim bulshooyin rayad oo ay ku kala qaataan macluumaad iyo warbixino muhiim ah. Waxaa ay ahaayeen naadiyo bulsho oo leysaga warqabo oo ay ummaddu sameysatay. Wixii ka qaldan waxaa loo toosin karey si qunyar socodnimo iyo xikmad leh. Idinka iyo xikmadna kala fog. Waxaad la dirirteen darisnimo wanaagii bulshada idinkoo abuuray sumaddo iyo magacyo dadka kala qoqobaya.
Salafi: Bal u kaadi, Hadda yaad u calaalacaleeysaa? Samankaa fitnadu iyo jahliga jiray waa laga soo gudbay. Ma shirkiyaadkii iyo bidcadii baad u baroordiiqeeysaa, oo aad u hiloowday? Walaal eeg maanta dumarku 100% waa muxajabaad, Maashaa Allaah! Taasi waxaa ay ku timid ikhlaas iyo camal jabaar ah oo la sameeyay. Eeg maanta magacyada islaamiga ah ee lala baxayo: Xamza, Usama, Bilaal, Muscab, Sumaya, Rayaan, Salma; Waa hore ayaa u danbeeysay magacyadii jaahiliga ah: Colaad, Barqad, Warfaa, Suuban, Sagal, Idil, iwm. Illaah baa hanuunka bixiya laakiin dadkan waa lagu dadaalay. Heeso iyo Muusigii fuxshiga ahaa waxaan ugu badalnay Anaashiid Islaami ah oo Carabi ah. Eeg masaajidada maanta waxaa buux dhaafiyay dhalinyaro ay ka muuqato sunnada, eeg heybadda ka muuqato, sida ay garka u deysteen, oo khamiisyada iyo cimaadaha, iyo rumayada u sitaan. Waxaa ay ku sharfan yihiin libaaska mu’minka. Waagii hore haddii aad wareeysato dhalinyarada waxbarashada dooneysa waxaa ay oran jireen waxaan baraneeynaa Qaanuunka, Cilmiga Dhaqaalaha, Cilmiga Siyaasadda, Cilmiga Bulshada, Cilmi Nafsiga kuwaa oo dhamaantood salka ku haya aqoon kufri iyo ilxaad. Maanta wiilka Muslimka ahi waxaa uu jecel yahay inuu barto Cilmul-Alxadiith, Culuumul-Qur’aan, Ashariicah, Al-Qiraa’aat iyo mararka qaar dhaqtarnimo.
Suufi: Saaxiib waxaan kuugu bishaareynayaa ineey timid ayaantii la fahmay ujeedooyinkiinii guracnaa. 30 sanno oo aad faafineeyseen mashruucinii oo aad idinka uun isku tilmaanteen inaad tihiin ‘Alfirqatu Naajiyah’ (Kooxdii keligeed cadaabka Alle ka badbaadeysay), shacabku waa uu fahmay waxaad dhaxalsiiseen. Isbaaradii ugu horeeysay waxaad u dhigateen caqliga iyo fekerka qofka Soomaaliyeed. Fatwooyin jar iskatuurnimo ah waxaa ay ina geyeeysiisay meesha aan maanta taagan nahay. ‘Illaah dartii baan kuu dilayaa’ ayaa waxaa la soo taagan nimankii madarsadii Salafiyada kasoo Aflaxay. Hawgaladii ka soo bilaabmay minbar la xoogo iyo siyaaro la banado, maanta waxaa ay mareeysaa heerkaa aad arkeeyso, oo dal dhan uu idiin afduuban yahay. Luuqado cusub oo aanan horey loogu aqoon dhaqanka siyaasada ayaad soo kordhiseen ‘Xukuumadda Murtadka ah, Ashahaado La dirirka’. Qofkii sida aydaan wax u arag yiraahda waa ‘murtad’ dhiigiisa in la qubo banaan yahay. Raxmadii, Naxariistii, Dulqaadkii iyo Cadaaladdii Islaamka waxaa lagu badalay isqarxin, ismaadaamin, gawrac, baqdin, argagax iyo cabsi abuur oo intuba lagu sifeeynayo halyeeynimo iyo jihaad barakeeysan. Barakicintii masaajidada aad ka soo bilaawdeen hadda idinkoo hubeeysan ayaad ummaddii oo idil barakicineeysaan. Waxaa la yaab leh dhoohanaanta iyo maangaabnimada idiinka muuqato. Ummadbaad leedihiin Ilaah dartii baan idiin barakicineeynaa, niman shishiiyana waan ka amar qaadanaa. ‘Abuu Yaxya Al-liibi ayaa inoo amiir ah’. Koleey aniga dhaqaaqa Salafiga ah qeybihiisa oo idil waa isku keey mid. Waa fahamkaa khalafsan ee xaraf-ku-dhagga ah, oo gacanka hadalka iyo badawnimadda boorinaya. Muwaadhinka Soomaaliyeed mugdiga aad u waddaan waa uu fahamsan yahay maanta. Waana taa maanta meel walbaa dhawaaqa caqliga iyo garashada wata ka yeerayo. Sheekadiinii waa soo xirantay. Ama gafuurka soo duubta ama calal madaaw walfiya, meel aad ku dhuuman kartaan malahan. Waxaad tihiin xoogagga mugdiga iyo takhalufka. Jiritaankiina fekredeed waxaa uu la siibmayaa kiina caskariga ah ee hadda laga guuleystay. Qunyar socodnimo, isudulqaadasho, iyo caqliga oo la adeegsado ayaa astaan u ah waagan cusub ee lagalay.
Salafi: Ma jihaadkii baad ku jeesjeeseysaa, cajiib? Cid xaqa Alle is hortaagi kartaahi ma jirto. Cududda mujaahidiinta ayaa lagu suulin munkar kastaa oo jira. Goor dhow waxaa Alle mahaddii ah inaadan helin qabri aad barakeeysataan, oo waataa ay mujaahidiintu faagayaan. Dawladda aan u baahanahay waa mid dariiq rabaani ku socon doonto o shareecada ku taagan. Iska ilow Qaramada Midoobay, Midawga Africa, Jaamacadda Carabta, IGAD, Beesha Caalamka, Bangiga Adduunka, IMF iwm, dhamaan kuwani waa hay’ado u adeega kufriga iyo gumeeystaha Reer Galbeedka. Guushu waxaa ay ku jirtaa la dagaalanka dhaaquudka. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Suufi: Inshaa’a Allaah Maalamaha soo socda ha u deymo la’aan. Bal eeg meesha uu aayahiina ku danbeeyo. Lacagihii Sucuudiga uu idiinku anqarinayay ma jiraan maanta. Shacabkii aad wareeriseena waa uu fahmay ujeedada ka danbeeysa inaad ugu danbeeyntii gafuurka u soo duubataan. Inaad dib-isu-eegtaan oo aad ka noqotaan falalkiina guracan, toobadna la timaadaan waa ay idiin furan tahay. Haddii aad il-adeyg iyo is-maqiiq ku sii socataana, hadda maalmihiinu waa tirsan yihiin. Allaha u gargaaro ummadeena dhibaateysan oo haka qabto kuwa lugooyada ula heelan.. Aamiin dheh!
Qore: Liibaan Cumar